Col. Cabdullahi oo ku Hungoobey Dhaqaale ku Raadsashada Adeegsiga Argagixisada
Buluugleey, Thursday, September 01, 2005
Bisha November sannadkii 2001 ayuu Col. Cabdullahi Yusuf adduunyada ku wargeliyey in degaanka Shimbiraale ee ku yaala xeebta gobolka Bari ay xaruun u tahay Argagixisada. Dhamaadkii sannadkaas ayaa waxaa degaankaas tegey saxaafada caalamka iyo mida Soomaalida, Shimbiraalana waa laga waayey wax argagixisaa. Arrintaas waxey odeygaas waayeelkaa ka dhigtay beenlow aan warkiisa dib dambe loo qeymeyn. Aduunyadu waxey ka dheregtey beenabuurashada korneylka oo looga bartay iney tahay xeel raqiisa ee uu kula dagaalamo raga ay siyaasada isaga soo horjeedaan ama kuwa ka soo jeeda beelaha ay isdiidan yihiin.
Dowladda Mareykanka ayaa ka gaabsatay dhaqaale ay Itoobiya uga balanqaaday iney ku bixiso mashruuca la dagaalanka argagaxisada lagu tilmaamay iney ka jirto Geeska Afrika. Taas waxey ka dambeysey ka dib markii ay dowladda Mareykanka u argtay isbaheysiga Col. Cabdullahi Yusuf iyo Mele Senaawi inuu yahay mid lagu yaboohsanayo xoolo lagu helo argagixiso been abuura oo aan dhab ahaan u ujirin. Mele Zanaawi ayaa mar uu soo booqday dalka Mareykanka wuxuu ka codsaday dowladda Mareykanka iney dib u soo celiyaan hantidii Itoobiya lagu siin jirey la dagaalanka argagixisada Geeska Afrika taas oo uu Mareykanku ku adkeystay ka noqoshadiisa.
Col. Cabdullahi ayaa tegey Sacuudiga 23dii Agoosto, 2005, waxaana soo doweeyey wasiirka Xajka kadib markii boqorka Sacuudiga uu diidey inuu si sharaf leh ugu soo dhaweeyo marka uu imaanayey dalka Sacuudiga. Korneylku wuxuu boqorka Sacuudiga ka codsaday dhaqaale uu kula dagaalamo argagixisada uu ku sheegay iney xaruun u tahay Muqdishu.
Col. Cabdullahi oo hilmaamay sharfdaradii uu kala kulmay Shimbiraale ayaa soo rogaal celiyey adeegsiga argagixisada wakhtigan la joogo oo ay siyaasada isaga soo horjeedaan beelaha degan Muqdishu. Sacuudiga oo aan dooneyn inuu taageero siyaasada Itoobiya oo uu u adeegayo Col. Cabdullahi yusuf ayaa kula taliyey korneylka in uu u dhego nuglaado dhexdhexaadinta caalamku ay ka wadaan khilaafka isaga kala dhexeeya raga ay siyaasada isaga soo horjeedaan.
Waxaan shaki lahayn in Muqdishu loogu tegayo beelo ka soo horjeeda siyaasada Col. Cabdullahi Yusuf uu ugu adeegayo cadowga Itoobiya ee aan marna loogu tegi doonin argagixiso. Waxaa xusuus mudan in Col. Cabdullahi oo hogaaminaya urur argagixisaa uu hadda ka hor ku xasuuqay gobolada dhexe boqolaal dadweyne Soomaaliyeeda oo rayida oo uu u arkayey iney ku heyb yihiin Siyad Barre oo isaga markaas ay qabiil ahaan isaga soo horjeedeen isaga, waxaana duulaankiisa ku wehliyaan ciidamadii cadowga Itoobiya.